Abavelisi kunye nabaXhasi beTheyibhile ephantsi I-China Low Scissor Lift Itafile yeFektri
Olona loncedo lukhulu kwiTheyibhile ePhantsi yeScissor Lift Table kukuba ukuphakama kwesixhobo kungama-85mm kuphela. Xa kungekho forklift, ungasebenzisa ngokuthe ngqo ilori yokutsala iimpahla okanye iipelethi kwitafile ngokusebenzisa ithambeka, ukugcina iindleko ze-forklift kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle komsebenzi.
Itafile yomthwalo wokukhuphela isikere isetyenziselwa ukulayisha iimpahla kwilori, emva kokufaka iqonga emngxunyeni. Ngeli xesha, itafile kunye nomhlaba zikwinqanaba elifanayo. Emva kokuba iimpahla zidluliselwe eqongeni, phakamisa iqonga phezulu, emva koko singahambisa iimpahla kwilori.
Uhlobo lwe-scissor lift itafile isetyenziselwa ukuphakamisa kunye nokuphatha iipelethi zomthi kunye neminye imisebenzi yokuphatha izinto. Eyona ndawo iphambili yomsebenzi ibandakanya iindawo zokugcina iimpahla, umsebenzi wokudibana, kunye namazibuko okuhambisa. Ukuba imodeli esemgangathweni ayinako ukuhlangabezana neemfuno zakho, nceda unxibelelane nathi ukuze uqinisekise ukuba inakho na